China Ugboro abụọ injection ịkpụzi Manufacturer na Supplier | Meste
Ugboro abụọ injection ịkpụzi bụ plastic ịkpụzi usoro nke abụọ tent nke Ebu na-n'out oge agbara na otu ọgwụ igwe na-etolite otu akụkụ nke abụọ dị iche iche plastic ihe.
Ugboro abụọ nkedo ịkpụzi (a na-akpọkwa ihe nkedo okpukpu abụọ, nkedo agba abụọ).
Ugboro abụọ nkedo nkedo bụ usoro nkedo plastik nke a na-agbanye ihe nkedo abụọ n'otu igwe ahụ n'otu oge iji mepụta otu akụkụ nke ihe plastic dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, ihe abụọ ahụ nwere agba dị iche iche, oge ụfọdụ ihe abụọ dị iche na ịdị nro dị iche iche, si otú a nweta ihe eji arụ ọrụ chọrọ yana aesthetics nke ngwaahịa a.
Ngwa nke okpukpu abụọ na-akpụzi plastik na akụkụ
The plastic akụkụ mepụtara ezie na abụọ-ọgwụ ịkpụzi e ji mee ihe na electronic ngwaahịa, electric ngwaọrụ, ọgwụ na ahụ ike, ezinụlọ ngwa, ụmụaka na ihe fọrọ nke nta niile ọzọ plastic ubi. Mmepụta na ịkpụzi akpụzi agba agba abụọ, yana nyocha na mmepe nke igwe na-akpụzi agba agba agba abụọ na akụrụngwa maka ịkpụzi agba agba agba abụwokwa ngwa ngwa.
Ihe ngosi nke akuku ogwu ogwu abuo
A na-eji ụdị plastik abụọ dị iche iche eme ihe, a na-akpọkwa ngwaahịa plastik ndị nwere ike ịpụta oke n'etiti ụdị plastik abụọ ahụ.
Gịnị bụ uru nke abụọ injection ịkpụzi?
Tụnyere omenala ọgwụ ịkpụzi, sọrọ-ihe co-injection ịkpụzi usoro nwere ndị na-esonụ uru:
1. Akụkụ ime na mpụta nke akụkụ ahụ na-eji ihe dị iche iche nwere njirimara dị iche iche, dị ka ndị nwere ezigbo ike na akwa ime ahụ na ndị nwere agba ma ọ bụ ọka na mpụga, ka ha wee nweta arụmọrụ zuru oke na ọdịdị ọdịdị.
2. Ngwakọta ihe dị nro siri ike: Isi akụkụ nke akụkụ na-eji ihe ndị siri ike, mgbakọ mgbakọ ahụ na-eji resin soft resin (TPU, TPE) nwere ike igwu egwu dị mma na ngwaahịa ahụ, dị ka mmiri na-adịghị, ájá.
3. Dika njirimara eji eme ihe di iche iche, dika akwa nke akuku di ike na eji resin plastik di nro, aru ma obu isi nke akuku ahu na-eji resin plastik siri ike ma obu plastic foamed nwere ike belata ibu.
4. Enwere ike iji ihe ndị dị ala dị ala belata ụgwọ.
5. Isi ihe nke akụkụ nwere ike iji ezigbo ihe dị elu ma dị iche iche, dị ka mgbochi nnyochi nke electromagnetic, omume dị elu na ihe ndị ọzọ iji mee ka arụmọrụ ngwaahịa dịkwuo elu.
5. E nwere ike iji ihe dị oke ọnụ nwere ihe pụrụ iche dị n'elu ma ọ bụ isi nke akụkụ, dị ka mgbochi nnyochi nke electromagnetic, omume dị elu na ihe ndị ọzọ iji mee ka arụmọrụ ngwaahịa dịkwuo elu.
6. Propergwakọta nke ọma nke cortical na isi ihe nwere ike belata nrụgide ihe mmapụta, bulie ike igwe ma ọ bụ njirimara nke akụkụ ahụ.
7. Tụnyere overmolding, ọ nwere nnukwu uru na àgwà, na-eri na arụpụtaghị.
The shortcoming abụọ ọgwụ ịkpụzi
1. Ọ dị mkpa itinye ego na ịzụta igwe ọrụ ịkpụzi okpukpu abụọ.
2. Ngwakọ nke ihe nkedo okpukpu abụọ chọrọ nkenke: azụ azụ nwere otu ihe achọrọ. Mgbe ngwaahịa nwere imewe mgbanwe, ma Ebu ga-eme otu mgbanwe iji hụ otu. Nke a na - agbakwunye ibu ọrụ na njikwa nke ọnwụ.
3. Ugboro abụọ nkedo ịkpụzi igwe bụ na ụzọ abụọ nke ebu na-ekerịta ohere na ike nke otu igwe ịkpụzi ọgwụ ahụ, ya mere enweghi ike ịmịnye ngwaahịa buru ibu.
Ihe dị iche n'etiti usoro ịkpụzi ọgwụ abụọ na usoro ịkpụzi
Ugboro abụọ injection ịkpụzi na overmolding na-ma abụọ injection ịkpụzi, ma ha bụ ndị dị nnọọ iche.
1. Overmolding usoro Ebu, makwaara dị ka abụọ na ịkpụzi, na-rụrụ na ndị nkịtị injection ịkpụzi igwe. A na-emepụta ngwaahịa ahụ na nkebi abụọ. Mgbe ewepụsịrị ngwaahịa ahụ site na otu ebu, a na-etinye ya n'ime ụdị ebu ọzọ maka ịkpụzi ọgwụ nke abụọ. Ya mere, nkịtị injection ịkpụzi igwe na-eji overmolding usoro.
2. Ugboro abụọ nkedo nkedo bụ na ụdị abụọ nke ihe plastik na-agbanye n'otu igwe na-akpụzi ọgwụ, na-akpụ ugboro abụọ, mana ngwaahịa ahụ na-apụta otu ugboro. N'ozuzu, a na-akpọkwa usoro a na-akpụzi okpukpu abụọ nke nkedo, nke a na-arụkarị site na usoro abụọ nke ebu ma chọọ igwe mpempe akwụkwọ mkpịsị aka pụrụ iche.
3. Ugboro abụọ injection ịkpụzi bụ a na-aga n'ihu mode nke mmepụta. O nweghi oru nke iwepu ma tinye uzo di n'etiti, chekwaa oge na njehie nke itinye uzo ozo, na-ebelata onu ogugu nke mmeputa nke oma, ma na-emeziwanye ihe ndi ozo na mmeputa nke oma ma e jiri ya tụnyere usoro overmolding.
4. overmolding usoro adabara ogwu ogbugba ịkpụzi nke ngwaahịa na ala àgwà chọrọ na obere iwu. Obere site na nkọwa nke igwe nkedo okpukpu abụọ, ọ n'ozuzu ya adabara maka ịkpụzi ogwu nke akụkụ buru ibu.
5. Ebu ụzọ abụọ nke ihe mkpuchi abụọ ga-abụrịrị otu, na encapsulation ebu enweghị ihe a chọrọ. Ya mere, nkenke na ọnụ ahịa nke okpukpu abụọ dị elu karịa nke ndị na-akpụzi ọgwụ ndị encapsulated.
Atụmatụ nke usoro ịkpụzi ọgwụ abụọ:
1. Na usoro nke nkedo nkedo nkedo okpukpu abụọ, e nwere ihe anọ dị mkpa: igwe ejiji nkedo nkedo, nkedo nkedo, ihe plastik kwesịrị ekwesị na akụkụ akụkụ ezi uche dị na ya.
2. Nhọrọ Nhọrọ nke Soft na Hard Rubber okpukpu abụọ na-akpụzi Ọkpụkpụ A ga-enwerịrị ụfọdụ ọnọdụ okpomọkụ dị n'etiti etiti agbaze nke ụdị ihe abụọ maka agba agba agba agba agba abụọ. N'ozuzu, a na-atụ aro ka ihe mgbaze nke ihe mbu nke mbu dị elu karịa nke ihe nke abụọ ahụ, na ihe mgbaze nke ihe mgbochi mbu ahụ dị elu karịa nke ihe nke abụọ ahụ.
3. Usoro ntinye nke uzo na ihe ndi ozo: ihe mbu nke eji eme ihe na-adighi nma, nke abuo bu ihe eji eme ya. Dịka ọmụmaatụ, ihe ndị na-abụghị transperent na-abụkarị PC nwere nnukwu ihe ọkụkụ, a na-eji PMMA ma ọ bụ PC eme ihe maka uzo abụọ. PC kwesiri ka echedo ya site na spraying UV. PMMA nwere ike ịhọrọ UV ma ọ bụ obi ike. Ọ bụrụ na enwere mkpụrụ edemede n’elu, ọ ga-ahọrọ UV.
Gịnị bụ abụọ-ọgwụ ịkpụzi igwe?
The ọgwụ ịkpụzi igwe na gbọmgbọm abụọ na ọgwụ usoro na ọnọdụ akakabarede usoro nke ebu na-akpọ abụọ-ọgwụ ịkpụzi igwe, nke a na-eji abụọ-agba ọgwụ ịkpụzi ịkpụzi. Ọgwụ na ịkpụzi igwe na-enwekarị ụdị abụọ: yiri ọgwụ ịkpụzi igwe na ọgwụ ịghasa na vetikal injection ịkpụzi igwe na injection ịghasa.
Gịnị bụ abụọ-injection akpụzi?
A na-akpọ ebu ahụ nke na-agbanye ụdị plastik abụọ n'usoro ma mepụta ngwaahịa agba abụọ. Ọkpụkpụ agba agba agba agba abụọ na-abụkarị usoro abụọ nke ebu maka otu akụkụ, nke kwekọrọ na nke mbụ na nke abụọ. The azụ ịnwụ (nwoke na-anwụ) nke abụọ na-anwụ bụ otu, ma na n'ihu anwụ (nwanyị na-anwụ) bụ ihe dị iche.
A ga-etinyerịrị ebu ihe ugboro abụọ n’igwe ịkpụzi ugboro abụọ iji mepụta nke ọma.
Atụmatụ na imewe nke okpukpu abụọ na-akpụzi Ebu
1. Ebu isi na oghere
Ihe na-akpụ akụkụ ahụ na-akpụ akpụ akpụkọ akpụkọ bụ otu ihe ahụ nke usoro nkedo izugbe. Ihe dị iche bụ na ntụmadụ nke nkedo ọgwụ na ọnọdụ abụọ ka a ga-ewere dị ka otu, na concave ebu kwesiri ijikọ aka ọnụ nke ọma. N'ozuzu, ụdị plastik a dị obere.
AKPỌ EBERE EBU
2. Usoro ejection
Ebe ọ bụ na enwere ike ịmepu akụkụ plastik nwere agba abụọ mgbe ejiri ọgwụ mgbochi nke abụọ, usoro demoulding na ngwaọrụ izipu mbụ agaghị arụ ọrụ. N'ihi kwụ n'usoro n'usoro ogwu igwe, ejection usoro nke ọgwụ igwe nwere ike ji mee maka ejection ejection. Maka igwe akụrụngwa na-agbagharị agbagharị, a gaghị enwe ike iji usoro ịpụpụ ejection nke igwe ogwu. Hydraulic ejection ejection ejection ejection usoro enwere ike ịtọ na tebụl rotary.
3. Gating usoro
N'ihi na ọ bụ nkedo nkedo okpukpu abụọ, a na-ekewa sistemụ ntaneti n'ime otu usoro ntanye na usoro ntinye nke abụọ, nke sitere na ngwaọrụ nkedo abụọ.
4, Ikike nke ntọala ebu N'ihi na usoro ịkpụzi okpukpu abụọ pụrụ iche, ọ kwesịrị ịkwado na ịhazi ibe ya, yabụ nha na nkenke nke ụzọ abụọ nke ngwaọrụ ndị nwụrụ anwụ kwesịrị ịdị na-agbanwe agbanwe. Maka ebu ebu n’eji n’agba ya, oke mmechi nke Ebu kwesiri ibu otu, etiti etiti ihe abuo a kwesiri idi n’otu okirikiri okirikiri, ihe di iche bu kwa 180. Maka igwe na –agbazi ogha n’iru, uzo abuo abuo. kwesịrị ịdị n'otu axis.
Development nke abụọ-ọgwụ ịkpụzi
Site na njirimara na ngwa nke ịkpụzi ọtụtụ agba na ịkpụzi ya na ngwongwo ya, enwere ike ịhụ na a ga-enwe usoro iji nwayọ nwayọ dochie usoro ịkpụzi ọgwụ ọdịnala n'ọdịnihu. Innovative injection ịkpụzi technology bụghị nanị na mma na nkenke nke injection ịkpụzi usoro, ma na-emepe na ubi nke ọgwụ na ịkpụzi usoro. Ngwá ọrụ ọpụpụ ọhụụ na usoro zuru ezu iji gboo mkpa na-arịwanye elu maka ngwaahịa dị iche iche, nke dị elu ma baa uru.
Mestech na-enye okpukpu abụọ ọgwụ moldinnng n'okwu ụgbọala, akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa, ụlọ ndị ọkà okwu, bọtịnụ igodo, njikwa na ngwaahịa abụọ ọzọ ma ọ bụ ngwaahịa abụọ maka afọ, biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Nke gara aga: Plastic injection igwe
Osote: Plastic akụkụ nke shadowless oriọna
Silkscreen ebi akwụkwọ na ụkpụrụ mma maka ...